घर » केटी खेल » Chef Barbie Chocolate Cheesecake
खेल जानकारी: Chef Barbie Chocolate Cheesecake
विवरण: बार्बी अब ठूलो महाराज छ र निर्देशनहरू पालना, तपाईंले संसारको सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु अर्को पाक चुनौती मा उनको मदत तयार सुपर तयार छन् भन्ने देखाउन र सामाग्री आफ्नो dispos मा पहिले नै आनन्द हुनेछ
खेल्नु: 33,696 ट्याग: barbie, barbie games, cake, chef games, केटी खेल
प्यारा सानो बच्चाहरु को स्नान
यो हाम्रो प्यारो बेबी स्नान गर्न को लागि एक समय छ। बेबी त्यो पानी संग खेल्दै मा धेरै रुचि छ। यो प्यारो केटी को हेरविचार। खेल मा दिइएको कदम निम्न द्वारा प्यारा बेबी संग एक चंचल स्नान छ। र माथि संग उनको राम्रो ड्रेस
फल निंजा शेफ
शेफ फलहरु निन्जा एक खेल को एक प्रसिद्ध श्रेणी निंजा गेम संग खेल हो। नयाँ खेलको साथ तपाइँलाई खेल्नको लागी आनन्द दिन्छ।
Halloween केटी शैली
त्यो माथि पोशाक माया गर्नुहुन्छ बालिका, हेलोवीन मारिया मनपर्ने छुट्टी छ! यो वर्ष उनले धेरै हेलोवीन दल गएर र प्रत्येक एक लागि फरक देखिए गर्न चाहन्छ गरिनेछ। उनको दराज Couture वेशभूषा, मजा wigs र सामान भरिएको छ। Hel
जनी छिटो खाना औंठी
तपाईं जनी ब्रावो संग खेल मन पर्छ? त्यसपछि हामी जनी ब्रावो संग एक साँच्चै धेरै राम्रो र हास्यास्पद खेल तपाईं उसलाई धेरै खाना खाने, अधिक पेशी बन्न मदत गर्नुपर्छ जहाँ प्रस्ताव। जनी तेज खाना चल्न सहायता र सबै राम्रो खाना छ कि एफए पकड
दिदीले हास्यास्पद खेलमा
दिदीले मजेदार खेल खेल्न! यो Dora.Have को सुपर सुन्दर खेल रमाइलो छ!
किन एशियाली रेस्टुरेन्ट जाने तपाईं! एक चलाउन सक्छ जब तपाईं आफ्नो स्टक, जलेको वस्तुहरू वा क्रोधित ग्राहकहरु लागि बाहिर हेर्न पर्छ या यसको पनि एली, भान्सा, वा अगाडि काउन्टर मा! सुरू एशियाली रेस्टुरेन्ट मताधिकार को कर्ण लिन र धेरै ग्राहकहरु सेवा एक
एक केक पसल दिनुहोस्। आफ्नो लक्ष्य केक सकेसम्म चाँडो, आफ्नो ग्राहकहरु बनाउन आफ्नो स्टोर सफल बनाउन पुस्तक मा नुस्खा पालना र सधैं एक लाभ बनाउन पूर्ण छुट राख्न र यसरी निश्चित छ।
बालिका लागि स्मृति खेल
यी प्यारा बालिका सँगै अप पोशाक प्रेम, तर चार मित्र सबै नै दराज साझेदारी हुँदा गाह्रो संगठित गर्न छ! तर यी साथि फैशन सुझाव दिन, त्यसैले शहर मा काम र रात बाहिर मा आफ्नो दिनको लागि तिनीहरूलाई मेल प्रेम।